विदेशमा सफल जीवनको परिभाषा के ? - Enepalese.com
विदेशमा सफल जीवनको परिभाषा के ?
इनेप्लिज २०७३ जेठ १ गते १:४७ मा प्रकाशित
हामी मानब चेतनसिलप्राणी हाम्रा इच्छा, चाहना र आबश्यकता पनि अनगिन्ति । साच्चै आबश्यकता हो वा महत्वकांक्षा, हरेक मानिसको परिभाषामा फरक पर्न सक्छ । हाम्रो आबश्यकता के हो ? कति भय पुग्छ ? सिमा के ?
धेरै नै बिबादस्पद बिषय । सानो वच्चा उसको इच्छा र आबश्यकता भनेको स्वतन्त्र रुपमा खेल्न पाउनु हो । उसलाइ आफ्नो स्वतन्त्रता हनन गरेको मन पर्दैन ।उसलाइ पैसाको कुनै सरोकार हुदैन । बयस्क अबस्था तिन त्रियोग चैाध भुवन देख्ने समय । अंहम र महत्वकांक्षाले चुरो नाघेको अवस्था । बाबुआमा भन्दा साथीभाई प्यारो। आकासको जुन टिपी दिने मन । पैसाको हाहाकार लागेको अबस्था। युवा अबस्था पढाइ लेखाइ च्याप, जिवनसाथीको खोजी, आफ्नै महत्वकांक्षा,बाबुआमा प्रतिको कर्तब्य, आफ्नै खुट्टामा उभिनु पर्ने चुनौती।
जागीर, पैसाको महत्व, जिम्मेवारी, सबै सन्तुलन मिलाउनु पर्ने अबस्था। मुख्य प्रस्न भनेको अमेरिकमा एउटा 3-४ परिवारको सदस्यले कसरी सरल र सफल जिवन बिताउन कति बार्षिक आय भए सकिएला ? निर्धारण कसरि र के को आधारमा गर्ने ? निश्यनै उतर सजिलो छैन । हरेक मानिस को ऊतर फरक फरक हुन सक्छ – अवस्था र आबश्यकता हेरि ? दुई परिवारमा जीवनशैली र सोचमा त अबश्य फरक होला तर मानिसको जीवन त एउटै होइन र ? तेसो भए सामान्य मापदण्ड कति त ? सामान्यतया १०+२ सम्म सरकारले पढाइदिन्छ(Private boarding बाहेक)। कलेजको लागि Scholarship, donation and loan विभिन्न option हुन सक्छ ।सरसर्ती हेर्दा अनुमानित मुख्य घर खर्चमा Health Insurance, copay/deductible, Home mortgage/Rent, HOA, Taxes, home insurance, Electricity/ Gas, Water, Car instalment and insurance, Cell/home phone bills, E-net, Home and car maintenance, clothing and food expenses, others miscellaneous expenses plus vacation and so on.
Maryland State को एक तथांक अनुसार 60-१०० Thousand बार्षिक आम्दानी गर्नेहरु मध्यम परिबारमा पर्दछन (Average ७२०००) अन्दाजी ४०००० हजार भन्दा कम आम्दानी गर्नेहरु(परिवार सख्या र आम्दानीको आधार हेरेर) न्यून आय गर्ने परिबारमा पर्दछन। न्यून आयमा पर्ने परिबारहरुको जीवन सघर्षमय तरिकाले गुग्रिरहेको भए पनि तर सरकरबाट पाउने Health Insurance, Tax return र अन्यले ठुलो सहयोग गरिरहेको हुन्छ ।
जसले बार्षिक १ लाख भन्दा भन्दा वढी आम्दानी गर्छन ,उनीहरु बारेमा यो लेखमा समाबेश गर्न खोजिएको होइन। उनीहरुको टेन्सन पनि आफनै छ । लगानीको Tension ,Tax तिर्ने tenson,Tax छल्ने Tension, Business मा investment गर्नेको Tension, Return हुने वा डुब्नेको Tension, Milliners बन्ने Berliners Tension, and so on…..महत्वकाक्षी सपनाहरु !
मध्यम परिबारमा पर्ने धेरै जसो परिवार खुसी रहन्छन वा देखिन्छन। अनुसन्धानले यहि देखाउछ। आबस्यकता छ त उपर्युत money management र मानसिक सोचको ! तेसो भए बिदेशमा सफल जिबन बिताउन आबश्यक पर्ने मुख कुरा वा आधार के त ? हालै गरिएको अनुसन्धानले निम्न ५ कुरा भएमा सामान्य सुरक्षित सफल बिताउन सकिन्छ।
1. Secure Job- even if you lose your job you will get other one.
2. Health Insurance- able to pay health insurance and medical expenses
3. Home – Able to pay mortgage/ taxes/insurances and others expenses
4. Saving account- – able to save some money for emergency
5. Vacation – able to go vacation for 3-5 days each year with family
यदि तपाइ संग यि माथीका ५ बुदाहरु छ र गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाइ मध्यम बर्गिय Happy family मा पर्नुहुन्छ । Happy हुनु नहुनु , लिनु नलेनु,ब्यबस्था गर्नु, नगर्नु तपाइको कुरा हो । मानिसको इच्छा र आवश्यकता अनगिन्ति हुन्छन, जुन कहिल्यै पुरा हुदैन । यदि हामी limit set र time set गरिएन भने हाम्रो जिबन सघर्षै सघर्षमा बित्नेछ। लोभ, लाभ र अरु संग तुलना गर्ने हाम्रो बानीले हामीलाइ सधै दुखि तुल्याउनेछ, बनाइरहनेछ ।
अझै पनि हामी हाम्रा छोराछोरीलाई हाम्रो इच्छा अनुसार राखन, बाच्न,पढाउन चाहन्छैा ।कतै हामी हाम्रा छोराछोरीलाई कमजोड त बनाइ राखेका छैनैा, अझै हाम्रो मानसिकता बदलिएको छैन। विदेशमा आएर पनि तिन पुस्तालाइ पुग्ने सम्पति कमाउन लागि परेका छैा। छोराछोरीहरु अमेरिकाको हावा लागि सकेको यथार्थता लाई स्विकार गर्न अनकनाउछैा। Nursing home/Eldercare मा छिर्ने बाध्यता र दिन नआउदा सम्म हाम्रो आखा नखुलेको त होइन ? न त हामी नेपाली बन्न सक्यैा न American ? कतै हामी सस्कार र मायाको जालमा आफ्नो खुट्टामा बन्चरो आफै हानी राखेका त छैनैा ?
कतै हामी आफ़ुले आफै लाई बुझ्न र चिन्न सकिनरएका त छैनैा। सघर्ष नै जीवन हो भन्नु भन्दा सन्तोष नै जीवन भन्नु पर्ने होइन र ? कतै पैसा पैसा र परिवार परिवार भन्दा भन्दा म को हु भन्ने आफ्नो परिचय भुलेको त होइन ? जब सम्म “म” को परिभाषा र म भित्रको महत्वकांक्षा, घमन्ड र अदुरदर्शिता मैले बुज्न सक्दिन तब सम्म खुशी म बाट टाढा टाढा भागीरहने छ, भागीरहने छ । एकातिर हामी खुसि खोजीरहेका छैा अर्को तिर खुशी आफु बाट टाढा टाढा भगाइ रहेकाछै ! &quot;फूलको आखामा फूलै संसार, कांढाको आखामा काढैं संसार&quot; !!!